सरकार पुनर्गठन र उपनिर्वाचन- डा. डि.आर. उपाध्याय – Hotpati Media
सरकार पुनर्गठन र उपनिर्वाचन- डा. डि.आर. उपाध्याय
१० मंसिर २०७६, मंगलवार १३:४३ मा प्रकाशित (8 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ३ मिनेट
डा. डि.आर. उपाध्याय – प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रीको हेरफेर प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो । तर, राम्रो काम गरिरहेका मन्त्रीलाई हटाउने र कार्यक्षमतामा कमजोर देखिएका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु उचित होइन । मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइएका केही मन्त्री र बहालवाला केही मन्त्रीवारे सामाजिक सञ्जालमा टिका टिप्पणीहरू उठिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदमा नयाँ ६ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री थपिएका छन् । ६ जना मन्त्री र दुईजना राज्यमन्त्रीको बर्हिगमन भएको छ । लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको चर्चा चल्दै आएको थियो । ठूलो सकसका बीच बल्ल तल्ल मन्त्रिपरिषद् फेरवदलले सार्थकता पाएको छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा मन्त्रीको हेरफेर प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार हो । तर, राम्रो काम गरिरहेका मन्त्रीलाई हटाउने र कार्यक्षमतामा कमजोर देखिएका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनु उचित होइन । मन्त्रिपरिषद्बाट हटाइएका केही मन्त्री र बहालवाला केही मन्त्रीवारे सामाजिक सञ्जालमा टीका टिप्पणीहरू उठिरहेका छन् ।
ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पनि २१ महिना पूरा भएको छ । यो अवधि भित्र जनताको मन छुने खालका कुनै राम्रा काम भने हुन सकेका छैनन् । सरकारले अपेक्षित गति लिन नसकेको यथार्थ हो । यो कुरा सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । सरकारले जतिसुकै राम्रो काम गरेको दाबी गरे पनि जनताले त्यस्तो अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बेथिति बढेको बढेको छ ।
सत्ता स्वार्थमा मुलुक अल्झिएको छ । सत्ताबाहेक नेताको अरू कुनै ध्यान छैन । यसरी मुलुक बन्दैन । मुलुक बनाउन इच्छा शक्तिका साथ नेताहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्छ । नेताहरूमा त्यस्तो देखिएन । कोही सत्तामा जान नपाएर रूवाबासी गरिरहेका छन् । सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । सत्तारूढ दल नेकपाभित्र शक्ति बाँडफाट र मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेरसँगै पार्टी र सरकार अबका दिनमा के कसरी अघि बढ्छन्् भन्ने कुरा चासोका रूपमा हेरिएको छ । पार्टी एकीकरणको डेढ वर्षपछि पुष्पकमल दाहालले कार्यकारी अधिकारसहित अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन् । ओलीले सरकार सञ्चालन गर्ने र दाहालले पार्टी सञ्चालन गर्ने गरी जिम्मेवारी बाँडफाट भएको छ । यसले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद केही समयका लागि साम्य पारेकोजस्तो देखिन्छ । ओलीले पूरा अवधि सत्ता चलाउने निर्णय भएको छ ।
दुईतिहाइ नेतृत्वको सरकारबाट अपेक्षाकृत काम नभएको टीका टिप्पणीवीच मन्त्रीमण्डल पनि फेरबदल भएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व भने कम भएको छ । पच्चिस सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा दुई जना मात्रै महिला परेका छन् । कार्य सम्पादनमा राम्रै ठानिएका केही मन्त्रीले विदा पाएका छन् । मन्त्रिपरिषद फेरबदल हुनुभन्दा अघि अयोग्य मन्त्रीहरू हट्ने भन्ने व्यापक प्रचारवाजी भएको थियो । तर, त्यसको ठीक उल्टो भएको छ । योग्य मन्त्रीहरू फालिए । अयोग्य मन्त्रीहरू फालिएनन् । गोकर्ण विष्ट र लालबाबु पण्डित नफालिनुपर्ने हो । यी दुई मन्त्रीहरू फालिएपछि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ ।
मुलुक संघीयतामा गए पनि कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा देखिएका ढिला सुस्तीले सकारात्मक संकेत गरिरहेको छैन । कर्मचारीतन्त्रको मनोबल बढाउन सकिएन भने सरकार सफल हुन सक्दैन । कर्मचारीतन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो । यसको सहयोगविना सरकार अघि बढ्न सक्दैन । अब सरकारले आम जनतालाई अनुभूत हुने गरी काम अघि बढाउनुपर्छ । पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा घनश्याम भुसालले कृषि तथा पशुपंछी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । यो उनका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो । नेकपाभित्र आदर्शवादी नेताको छवि बनाएका भुसाललाई मन्त्री बनाएकोमा सबैको चासो बढेको छ ।
जनताले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । उनी वामपन्थी आन्दोलनका प्रखर वक्ता र माक्र्सवादी चिन्तकका रूपमा चिनिन्छन् । उनी राजनीति सिद्धान्तका आधारमा चल्नु पर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने नेता हुन । यसअघि झलनाथ खनालको कार्यकालमा उनीविना विभागीय मन्त्री बनेका थिए । सरकारले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा दिएको छ । देश समृद्ध बन्नलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनु अति आवश्यक छ । कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका भुसालले कृषि क्षेत्र के कसरी विकास गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यसका लागि अव भुसालले आदर्श मात्र छाँटेर हुदैन, व्यवहारमा देखाउनु अवसर र चुनौती दुवै उनका सामु आएको छ । त्यस्तै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर यादवका अघि पनि अवसर र चुनौती दुवै छन् । उनका लागि अवसर भन्दा चुनौति बढी छन् । सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा साकार पार्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अत्यन्तै महत्वपूर्ण मन्त्रालय हो ।
सरकारको पुनर्गठनसँगै उपनिर्वाचनको चटारो पनि लागेकोे छ । यही मंसिर १४ गते संघीय संसदको एक स्थानमा, प्रदेश संसदको तीन स्थानमा र एउटा उपमहानगरपालिकाको मेयरका साथै विभिन्न पालिकाका अध्यक्ष तथा वडा अध्यक्षसमेत गरी ५२ स्थानमा उपनिर्वाचन हँुदै छ । उपनिर्वाचनको तापक्रम बढ्दो छ । खास गरी कास्की क्षेत्र न २ मा हुने संघीय संसदको उपनिर्वाचन प्रति धेरैको चासो र उत्सुकता बढेको छ । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको हवाई दुघर्टनामा परेर निधन भए पछि कास्कीको क्षेत्र न २ रिक्त हुन गएको हो । उक्त रिक्त स्थानमा रवीन्द्रकी धर्मपत्नी विद्या अधिकारीले उम्मेदवारी दिएकी छिन् ।
सत्तारूढ नेकपासँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत उपनिर्वाचनलाई विशेष महत्व दिएर तयारी अगाडि बढाएको छ । सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका निम्ति यो उपनिर्वाचन चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । यो उपनिर्वाचन आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पछाडि हुन लागेको छ । यो उपनिर्वाचनमा सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । निर्वाचनको आवश्यक तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटिरहेको अवस्था छ । सरकारले उचित वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजनासमेत बनिसकेको अवस्था छ । मुलुकमा दुई तिहाइ नेतृत्वको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाबाट नेपाली जनता सन्तुष्टि छन् कि छैनन् भन्ने कुरा यो उपनिर्वाचनको परिणामले फैसला गर्नेछ । अब यो परिणाम कुर्न धेरै दिन बाँकी छैन । सरकार लोकप्रिय छ की छैन भन्ने यसले देखाउने छ ।
अघिल्लो निर्वाचनमा जनताले ठूलो आशा र भरोसासहित नेकपालाई ठूलो जनादेश दिएका हुन । जनअपेक्षाअनुसार सरकार चलेको छ कि छैन ? यो प्रश्नको उत्तर आसन्न उपनिर्वाचनको परिणाले दिने छ । यस निर्वाचनबाट आउने परिणाम प्रतिनिधिमूलक हिसाबले महत्वपूर्ण छ । आगामी तीन वर्ष पछि हुने आवधिक निर्वाचनको परिणामलाई समेत अन्दाज गर्न यो उपनिर्वाचनले आधार दिन सक्छ । निर्वाचन परिणाम सत्तारूढ दलका पक्षमा सोचेबमोजिम आउन सकेन भने यस निर्वाचनको असर सत्ता पक्षलाई नै पर्ने छ । यतिखेर नेपाली जनताले सरकारका काम कारबाही राम्ररी मूल्यांकन गरेर बसेका छन् । सरकारका काम कारबाहीबाट जनता सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन् । यो साँचो कुरा हो । जनताका दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम खासै हुन सकेका छैनन् ।
जसले गर्दा सरकार आलोचित बन्दै गएको छ । यो वर्तमान सरकार गठन भएपछि जनताले जे आशा र अपेक्षा गरेका थिए, त्यो जनताले प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले आफनो काम कारबाहीबारे समीक्षा गदै साढे दुई वर्ष प्रभावकारी ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यो सरकार सफल हुन सकेन भने कम्युनिस्ट सरकार असफल हुन्छ । त्यति मात्र होइन, यो राष्ट्र नै असफल हुने खतरा आउन सक्छ । पार्टी र मुलुक दुवैका लागि दुर्भाग्य हुनेछ । लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता पछि मुलुकले स्थिर र दुईतिहाइको सरकार पाएको छ । इतिहासकै बलियो दुईतिहाईको सरकार बनेपछि जनअपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । सरकारले जनताले अपेक्षा गरे जति लोकप्रियता हासिल गर्न सकेको छैन ।